टेलिकमले मल्टिमिडिया सेवा दिन्छ : कामिनी राजभण्डारी, महाप्रबन्धक, नेपाल टेलिकम | My News Nepal
पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवामा राम्रो सुधार ल्याएको छ । सुधार ल्याएपनि ग्राहकले गुनासो गर्न भने छाडेका छैनन् । टेलिकमका सेवा लिने ग्राहकहरूले तुलनात्मक रुपमा सेवा गुणस्तरीय पाएको महसुस पनि गरिरहेका छन् । कहीले काहीँ टेलिकमको सेवामा गडबढी आउने गरे पनि तत्काल सुधार हुने गरेको छ । विश्व बजारमा आएका प्रविधिलाई नेपाल टेलिकमले पनि भित्र्याउने गरेको छ । सरकारको स्वामित्व रहेको टेलिकमको उच्चतहमा पुग्ने कामिनी राजभण्डारी पहिलो महिला हुन् । सन् १९८५ मा इन्जिनियरका रूपमा टेलिकममा प्रवेश गरेकी कामिनी राजभण्डारीले अहिले महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएकी छन् । उनको कार्यकाल आठ महिना पुगेको छ । टेलिकमभित्र नेटवर्क प्लानिङ, जिएसएम प्लानिङ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, अनुगमन र मूल्यांकन विशेषज्ञका रूपमा काम गरेको अनुभव उनलाई छ । कामिनीले पञ्जाव इन्जिनियरिङ कलेज चण्डीगढबाट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेसनमा स्नातक गरेकी छन् । उनले एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी बैंककबाट म्यानेजमेन्ट अफ टेक्नोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् ।२२ सेप्टेम्बर २०१६ मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भएपछि कामिनीले टेलिकममा उल्लेख्य सुधार गरेकी छन् । विभिन्न बाधा व्यवधानका बाबजुद उनले कतिपय नयाँ प्रविधिहरू भित्र्याएकी पनि छन् । टेलिकमको सुधार र नयाँ योजनाहरूका विषयमा भण्डारीसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले गरेको कुराकानी:
० तपाईको नयाँ कार्य योजनाहरू के–के हुन् ? – मुलुकभर नै फोरजी सेवा विस्तार गर्ने प्रमुख कार्ययोजना छ । नेपाल टेलिकम र आरटिटिए फन्डबाट मध्य पहाडी लोकमार्ग प्रदेश १, २ र ३ मा समेट्ने गरी अप्टिकल फाइभर बिस्तार गर्ने तयारी रहेको छ । जसबाट नेपाली जनताले डाटा सर्वसुलभ रुपमा पाउने गरी योजना बनाई रहेका छौं । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरू सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट र रसुवामा हरेक गाविसहरूमा टेलिकमले प्रदान गर्दै आएको प्रविधिमार्फत इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने योजना रहेको छ । ० फोरजीको सेवामा गुनासो आयो भन्ने सुनिन्छ नि ? – होइन । फोरजीमा खासै गुनासो छैन । जुनदिन हामीले फोरजी सेवा सञ्चालन ग¥यौं । हामीलाई ग्राहकको राम्रो रेस्पोन्स आयो । एकै दिनमा २० देखि ३० हजार ग्राहकले फोरजी सेवा लिनुभयो । त्यति राम्रो रेस्पोन्स आएको थियो । तर, कहिले काहिं सिष्टममा समस्या आउँछ । नआउने होइन । खासै समस्या आएको थाहा पाएका छैनौं । ० फोरजी सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने कुनै योजना अगाडि सार्नु भएको छ ? – हामीले फोरजी सेवालाई अझै गुणस्तरीय र ग्राहकले अझै बढी फोरजी सेवा प्रयोग गरुन् भनेर विभिन्न किसिमको डाटा सर्भिसहरू ल्याएका छौं । गतहप्ता मात्रै हामीले नाइट डाटा प्याकेज ल्याएका छौं । डे प्याकेज पनि ल्याएका छौं । यस्ता प्याकेजमा स्पिड हाइ हुने र ग्राहकहरूले सस्तोमा इन्टरनेट सेवा पाउँछन् । त्यो प्याकेज ग्राहकहरूले व्यापक रुपमा प्रयोग गरेको देख्यौं । अब आउने दिनमा हामीले छिटो नै फोरजीमार्फत विभिन्न किसिमको म्युजिकहरू डाउनलोड गर्न सक्ने, सुन्न सक्ने, भिडियो सर्भिसहरू पनि प्रयोग गर्न सक्ने तथा विभिन्न किसिमको डाटाप्याकेजहरू ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । ० नेपाल टेलिकमले गाउँमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पु-याउने कुरा कहाँ पुग्यो ? – नेपाल टेलिकमले पहिलो पटक आरटिटिए फण्ड प्रयोग गरेर विभिन्न ग्रामीण भेगहरूमा, सामुदायिक स्कुलहरूमा, सामुदायिक अस्पतालहरूमा र सार्वजनिक स्थानहरूमा वाईफाई दिने तयारी गरेको छ । त्यसमा हामीले केही अनुदान दिने र केही आरटिटिए फन्डबाट खर्च गर्ने योजना बनाएका छौं । कतिपय ठाउँहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम हामीले सुरु गर्न लागेका छौं । ० टेलिकमले गुणस्तरमा सुधार आएको बताइरहँदा आलोचना पनि भइरहेको छ नि ? – सिष्टममा कहिले काहिं समस्या त आउँछ नै । हामीले कुनै क्षेत्रमा यति ग्राहकलाई सेवा दिने भनेर डाइमेन्सन गरेका हुन्छौं । कहिले काहिं अपरझट् चाप बढ्दा त्यस बेला गुणस्तरमा समस्या आइपर्छ । तर, अहिले हाम्रो गुणस्तरमा अत्याधिक सुधार भएको छ । हाम्रा उपकरणहरूलाई नियमित रुपमा मोनिटर गरिरहेका छौं । १२ घण्टा, २४ घण्टासम्म टेलिकमका हाम्रा प्राविधिकहरूले पूरा डिउटी गरेर उपकरणहरूलाई अब्जर्भ गरिरहेका छन् । ‘स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन’ गर्ने गरी हाम्रो पूर्ण रुपमा मोनिटरिङ भइरहेको छ । अप्टिमाइजेसन पनि गरिएको छ । कुनै ठाउँमा पुरानो प्रविधिले गर्दा ग्राहकले राम्रो गुणस्तर सेवा नपाएका हुन सक्छ । त्यस्तो ठाउँमा हामीले नयाँ प्रविधिमा माइग्रेसन गरिरहेका छौँ । कैयौं ठाउँहरूमा अण्डर डाइमेन्सन भएको वा क्षमतामा काम गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसमा अपडेट भर्सनको सामान राखेर गुणस्तरलाई कुनै पनि रुपमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरेर काम गरिरहेका छौं । ० चीनसँग पनि अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट ल्याउने कुरा के भएको छ नि ? – नेपाल टेलिकमको निर्भरता भारतसँग मात्रै थियो । म आइसकेपछि चाइना टेलिकमसँग सम्झौता भइसकेको छ । रसुवागढी नाकाबाट हामीले इन्टरनेट ब्रोड ल्याउँदै छौं । सायद जुन महिनासम्म इन्टरनेट ल्याउने छौं । अब नेपाल टेलिकमले भारतसँग मात्रै इन्टरनेटमा भरपर्नु पर्दैन । बैकल्पिक रुपमा चाइनासँग पनि इन्टरनेट ल्याउने सुरुवात हुँदैछ । सम्झौता भइसकेको छ ।
० नेपालमा चाइनाको इन्टरनेट कहिलेबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ ? – हामी त तयारी अवस्थामा छौं । रसुवागढी नाकामा विभिन्न किसिमको प्राकृतिक समस्या छ । अप्ठ्यारो ठाउँ छ । विभिन्न कारणले गर्दा समस्या आएको हो । जति सक्यो छिटो हामीले काम गर्दै छौं । इन्टरनेट आउने छ । ० तपाई आएपछि टेलिकमभित्र के–के सुधार गर्नु भयो ? – म आएको आठ महिना भएको छ । ‘स्ट्य्राटिजी पार्टनर’ अर्थात रणनीतिक साझेदार ल्याउने कार्य धेरै अगाडिको योजना थियो । अहिले टेन्डरमा गइसकेको छ । कन्टयाक्ट हायर गरिसकेका छौं । काम पनि सुरु भइसकेको छ । ०६७÷०६८ सालदेखि विभिन्न रिजल्टहरू रोकिएको थियो । करिव डेढ वर्षदेखि कुनै पनि विज्ञापन हुन सकेको थिएन । विज्ञापन निकाल्न नसक्दा दरबन्दी पूरा हुन सकेको थिएन । यस्ता खालका थुपै संवेदनशील कामको निर्णय हुन सकेको थिएन । क्रमिक रुपमा ०६७ सालदेखिको रिजल्ट प्रकाशित गरेर पदपूर्ति पनि भइसकेको छ । कर्मचारीको विभिन्न तहको विज्ञापन गरेर हालसम्म दुई सय ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई पदपूर्ति गरिसकेका छौं । कोही बढुवामा त कोही आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । आउने दिनमा थप बढुवाको लागि काम अगाडि बढाउने छौं । रिङब्याक टोन अर्थात मोबाइलमा कुन गीत राख्ने भन्ने काम ल्याइएको छ । बिगतमा पनि यो थियो । तर, कुनै कारणले रोकिएको थियो । यो पुनः सञ्चालन भएको छ । आउने दिनमा हाम्रा पोष्टपेड ग्राहकहरूलाई रियल टाइम सुविधा दिने सिष्टम दिँदै छौं । टेलिकमले विभिन्न प्रविधिमार्फत दिएको सेवाहरू एउटै सिष्टममार्फत दिन सुरुवात भइसकेको छ । एकद्वार सेवा प्रणाली पनि सुरु भइसकेको छ । एकद्वारबाट ग्राहकले सेवा पाउन सक्नु हुनेछ । यो बोहक पनि टेलिकमभित्र सानातिना धेरै कामहरू भएका छन् । ० तारसहितको (ल्याण्डलाइन)फोनमा अरु सेवा दिने तयारी भएको छ कि छैन ? – तारसहितको फोनमा पुरानो प्रविधिको उपकरण छन् । क्रमिक रुपमा पुरानोलाई नयाँ प्रविधिले विस्थापित गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । हाम्रा साढे ६ देखि साढे ७ लाखसम्म ग्राहक छन् । दुई लाख ग्राहकको त नयाँ प्रविधिमा परिमार्जन भइसकेको छ । बाँकी ग्राहकको सेवालाई पनि सुधार गरेर जाने छौं । हाम्रो आयोजना पनि चलिरहेको छ । जतिसक्दो ग्राहकको घरसम्म साना–साना एक्सचेञ्च राख्छौं । पहिला लामो दूरीमा एक्सचेञ्ज हुन्थ्यो । जसका कारण समस्या थियो । मेरो लक्ष्य भनेको डाटा सर्भिस हो । ग्राहकलाई जति सक्यो त्यति राम्रो डाटा सर्भिस दिनुपर्छ । क्रमिक रुपमा मल्टिमिडिया सर्भिस दिने हो । तारसहितको टेलिफोनमा नयाँ प्रविधिमा भ्वाइस डाटा र मल्टिमिडिया सर्भिस दिने लक्ष्य लिएका छौं । मोटामोटी ५० प्रतिशतभन्दा बढी तारसहितका ग्राहक नयाँ प्रविधिमा गइसकेका छन् । अर्को कुरा फाइभर टू होम पनि ल्याइँदै छ । त्यसले पनि डाटा सर्भिस दिनेछ । यसलाई पनि हाइ स्पिडमा सेवा दिने छौं । अब आउने दिनमा नेपाल टेलिकमको लक्ष्य नै यही हुन्छ । फोरजीलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने । फाइभर टू होम पनि हाम्रो मुख्य योजनामा रहनेछ । ० ल्याण्डलाइन फोनबाट टेलिभिजन हेर्न पाइने कुरा आएको थियो, कहाँ पुग्यो ? – फाइभर टू होमबाट घरसम्म फाइभर जान्छ । कपर तारले गर्दा डाटामा गुनासो आइरहेको छ । यसलाई क्रमिक रुपमा निरुपण गरिनेछ । फाइभर टू बिलिङ पनि लगिरहेका छौं । अपार्टमेन्ट, अस्पताल आदि ठाउँमा यो सुविधा लगिसकेका छौं । डिस्टेन्स कम हुँदा गुणस्तरमा सुधार आउँछ । र उपभोक्तालाई सजिलो हुन्छ । हाम्रा ग्राहकहरूले छिटोभन्दा छिटो ल्याण्डलाइन टेलिफोनबाट मल्टिमिडिया सेवा पाउनु हुनेछ । टेलिभिजन पनि हेर्न सक्नु हुनेछ । ० नेपाल टेलिकमभित्र राजनीति छ भन्ने सुनिन्छ, बास्तविकता के हो ? – पहिला पाँच वटा युनियन थिए । अहिले चार वटा भएका छन् । उहाँहरूबाट मैले सहयोग पाएको छु । सहयोग नभएको भए यति ठूला कार्यक्रम र योजनाहरू कसरी गर्न सक्थे ? उहाँहरूसँग छलफल गरि व्यापक कोर्डिनेशन गरेर म अगाडि बढेको छु । कतिपय ठाउँहरूमा युनियनहरूले मार्गदर्शन पनि गरिरहेका छन् । यति धेरै काम सहयोगकै कारण भएको हो । विवाद आएको छैन । राजनीति जहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि युनियनको चुनाव हुन थालेको छ । सहमति भएको छ । (यूनाइटेड पोस्टसाप्ताहिकबाट )